Top 3 Samsung File Nyefee softwares
Android ka n'ụzọ nkịtị adia mkpanaaka ahịa site n'ịghọ ọbụ ikpo okwu maka ọtụtụ ndị mobile n'ichepụta ụlọ ọrụ. Samsung bụ na-eduga emeputa ahapụ ndị ya na ngwaọrụ na etinyegoro Android. E nwere ọtụtụ Samsung faịlụ transfer utilities na ahịa nke na-eme ka ọ dị mfe n'ihi na ọrụ jikwaa faịlụ na ha Samsung igwe na mbadamba. Esonụ bụ n'elu gosiri Samsung faịlụ transfer softwares.
1. Samsung Kies - Samsung faịlụ transfer
Samsung Kies, emepụta site Samsung Company, bụ free Samsung data transfer software. Na ya enyemaka, Samsung ọrụ nwere ike nyefee music, photos, video, na ndị ọzọ na site na Samsung igwe na mbadamba for free.
Nyefee music, videos, photos, kọntaktị na ndị ọzọ site na otu Samsung ngwaọrụ ọzọ;
Bugharịa music, photos, na kọntaktị na videos n'etiti Samsung ngwaọrụ na kọmputa;
Mmekọrịta kọntaktị, ọrụ, memo na kalịnda na Outlook;
Ndabere na weghachite kọntaktsị, oku na ndekọ, ozi, music, videos, memo, email akaụntụ Ama, foto, S Planner na akwụkwọ;
Cons: bụghị na-akwado na-ebufe ngwa.
Ndị na-n'ime music na vidiyo, texting na ngwa ga-a n'anya Samsung mobile data transfer software - na Wondershare MobileGo for Android ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na fọrọ nke nta niile Samsung ngwaọrụ ike ime ihe Samsung Kies ike. Ọ na-ekwe ka ndị ọrụ na jikwaa ha Samsung ngwaọrụ na ma ọ bụ na-enweghị eriri USB.
Nyefee niile ma ọ bụ kọntaktị ahọrọ, SMS, ngwa, photos, videos na music n'etiti Samsung ntị na mbadamba;
Ndabere ngwa, kọntaktị, kalenda, oku na ndekọ na SMS si Samsung ngwaọrụ na kọmputa na-weghachi na 1 click;
Hazie kọntaktị: dezie, mbubata, bupu,
Anata ma ọ bụ zipu SMS site na kọmputa otu ma ọ bụ ndị ọzọ ndị mmadụ;
Wụnye, bupu, uninstall na òkè ngwa mfe;
Dọrọ na dobe photos, videos na music si Samsung ngwaọrụ na kọmputa, na Anglịkan;
E wezụga Samsung, ọ na-akwado LG, HTC, Sony, Motorola, Google na ndị ọzọ Android ngwaọrụ.
Adịghị akwado akwado dee, memo na akaụntụ email na Samung ngwaọrụ.
Dị ka aha ya na-egosi, ndị Wondershare MobileTrans bụ a Samsung faịlụ transfer software. Ọ bụ dakọtara na multiple Samsung igwe na mbadamba. Ọ nwere ike na-nyefee kọntaktị na ndị ọzọ data n'etiti Samsung ngwaọrụ, Nokia (Symbian) ekwentị na iDevice na otu click.
Nyefee na kọntaktị, ngwa, videos, oku na ndekọ, music, SMS na foto n'etiti Samsung ngwaọrụ na ndị ọzọ na gam akporo igwe;
Bugharịa music, videos, kọntaktị, SMS na foto n'etiti Samsung na ngwaọrụ ma iPhone, iPod aka na iPad, ọhụrụ akwado iOS 9, iPhone 6S Plus, iPhone 6S;
Detuo kọntaktị, music, SMS, foto na vidiyo si Nokia (Symbian) ekwentị Samsung ekwentị;
Ịgbanwee kọntaktị site na Samsung ekwentị Nokia (Symbian) ekwentị;
100% ọdịnaya transfer ọsọ ọsọ na n'enweghị.
Uable jikwaa data on Samsung ekwentị na mbadamba. Naanị akwado data nyefe.
> Resource> Nyefee> Top 3 Samsung File Nyefee Software